DHAGEYSO:Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo la doortay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo la doortay.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Gaorwe waxay ku doorteen Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaas.
Xildhibaanada ayaa Guddoomiye u doortay Cabdixakiin Maxamed Axmed [Dhoobo,wuxuuna helay 43 Cod ,halka musharaxii ay wareega labaad ee doorashada isla soo gaareen Cabdijamaal Cismaan Maxamed uu isna helay codod gaaraya 23 Cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha KMG ee baarlamaanka maamulka Puntland Xaseen Yaasiin Xaaji Diiriye.
Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo looga guulaystay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa bogaadiyay masuulka ka guulaystay wuxuuna balan qaaday inuu si wanaagsan ula shaqayn doono,wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyay gudigii doorashooyinka ee howsha maamulayay
Cabdixakiin Maxamed Axmed [Dhoobo oo loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Putland ayaa sidoo kale u mahadceliyay dhamaan qaybaha doorashadaan Soo abaabulay mushaarxiintii iyo xildhiibanada dowlada dhexe ka socday ee halkaasi ku sugnaa wuxuuna shacabka iyo masuuliyiintaba ka codsaday inay la shaqeeyaan si uu howshiisa u guto.
Cabdixakiin Maxamed Axmed [Dhoobo oo maanta loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Maamulka Puntland wuxuu saddex mar u soo tartamay Kursiga Gudoomiyaha Gollaha Wakiiladda Puntland sanadihii [2014, 2015 iyo 2019 oo maanta uu ku guulaystay.
masuulkaan ayaa doorashadii 2014 ku haray wareegga kowaad, wuxuuna markale isku soo taagay isla xilkaan sanadkii 2015 markii Xildhibaanada Puntland ay xilka ka qaadeen Saciid Xasan Shire oo baarlamaanka hogaaminaya, balse waxaa mar kale ka adkaadey Axmed Cali Xaashi oo xiligaas loo doortay gudoomiya baarlamaanka Puntland.
Xulitaankii xildhibaanada maamulka Puntland ayuu kursiga Xildhibaanimo wuxuu kasoo galay gobolka Sanaag waxaana lagu wadaa inuu wakiilada Puntland sii hogaamiyo afarta sano ee soo socota maadaama uu ka guulaystay dhamaan mushaarxiintii la tartamayay oo gaarayay ilaa sadex xubnood.
Saacadaha soo socda ee isla maanta ayaa lagu wadaa in baarlamanka maamulka Puntland au doortaan labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka Puntland.
Ammaanka halka ay doorashadu ka dhacayso ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana dhamaan xiran wadooyinka Soo gala xarunta baarlamaanka Puntland iyo kuwa ka baxa.
← Hal qof oo ku dhintay duufaan ku dhufatay Thailand
Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo u hanbalyeey gudoonka cusub ee Baarlamaanka Puntland. →